Shinjuku Station Tokyo(26th June)
Events • Jun 27, 2021
6月26日、我々TTAJチームは、東京の新宿駅でチラシやポケットティッシュなどを配る周知活動を行いました。 今週はJ M F C A チームのご協力をいただいて募金活動を行いました。
Not kneeling down under Military Dictator's boots ✊🏻
26th of June, TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Shinjuku Station, Tokyo.
JMFCA collaborated with us this week activity for fund raising in order to support CDMers and other areas needed for help in Myanmar.
Taking temperatures of our volunteers, washing hands throughly, utilising gloves are also carried out in order to feel safe for Japanese people while receiving the pamphlets.
We were able to hand out over 600 pamphlets and 600 pocket tissues from 3:00pm till 5:30 pm.
We would like to express our deepest gratitude to photographers , guitarist and our beloved volunteers who came down to help us without complaints under this vicious heat.
"စစ်ဖိနပ်အောက် ဒူးမထောက်ဘူး " ✊🏻
၆ လပိုင်း ၂၆ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo / Shinjuku ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ယခုတစ်ပတ် TTAJ အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုတွင် Japan Myanmar Future Creative Association အဖွဲ့မှ အတူတကွ လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အလှူငွေကောက်ခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုကိုပါ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
Pamphlets လက်ခံယူတဲ့ဂျပန်ပြည်သူ/သားများ စိတ်ချရစေရန် Volunteers များအားအပူချိန်တိုင်းတာခြင်း၊ စနစ်တကျ လက်ဆေးခြင်း၊ လက်အိတ်များဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် Corona ကူးစက်မှု မပြန့်ပွားဖို့ အထူးဂရုစိုက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ညနေ ၃ နာရီမှ ၅နာရီခွဲအတွင်း
လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၆၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(နွေဦးတော်လှန်ရေး၊သွေးသစ္စာ၊ အလိုမရှိ)သီချင်း၃ပုဒ်ကို ဂစ်တာတီးပြီး Performance ပြုလုပ်ကာ သံပြိုင်သီဆိုနေစဉ် ဂျပန်ပြည်သူများကလည်း လက်၃ချောင်းထောင်ပြီး အားပေးစကားများပြောပေးကြတာမို့ အားတက်ရပါတယ် ။
မွန်းတည့်နေပူကျဲတဲ ဖြစ်သော်ငြားလည်း မငြီးမငြူဘဲ အပတ်စဉ်တိုင်း လာရောက်အားဖြည့်ပေးပါသော Guitarist အစ်ကိုနှင့်တကွ ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို မှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပေးပါသော Camera သမားများ၊ TTAJ's Volunteers များအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် ။ 🙏